12. Dadka qalaad iyo qaxootiga - Ku soo dhowow Nederland
Nederland waxay la qabsatay dadka qalaad ee ku nool
Qarniyo badan waxaa Nederland imaanayey qaxooti badan. Masiixiyiin Protestant ah oo cadaadis ka cararayey, Yuhuud iyo dad liberal ah ama maskax furan ayaa Qarnigii Dahabiga ahaa Nederland u soo cararay. Markii dambena waxaa yimid dad ka yimid waddamadii Nederland gumaysan jirtey, gaar ahaan Indonuusiya, Surinaam iyo Nederlandse Antillen.
Sannadihii 1960, iyo 1970-kii
Dib u dhiskii Nederland kaddib Dagaalkii Labaad ee Adduunka si degdeg ah ayuu u dhacay. Waxaa kaloo kordhay wax soo saarkii xagga wershadaha, sidaa daraadeed waxaa loo baahday shaqaale badan. Bilowgii waxaa shaqaalahan laga keeni jirey waddamada Spain iyo Talyaaniga. LIxdameeyadii qaybteedii dambena waxay badankoodu ka imaanayeen Turkiga iyo Marooko. Gaar ahaan waxaa aad loogu baahnaa shaqaale xoogsato ah.
Markii ugu horraysay ee taariikhda ayaa si toos ah Nederland dad loo keenay. Shaqaalahan waxaa loogu yeedhi jirey 'gastarbeiders' ama 'xoogsatadii martida ahayd'. Dadku waxay filayeen inay waddamadoodii ku noqnayaan marka shaqadu ka dhammaato, laakiinse taasi may dhicin.
Laga bilaabo sannadihii sideetaneeyadii Nederland waxaa yimid dad badan oo qaxooti ah, kuwaasoo noloshooda la soo baxsaday. 1980-kii sannadkii 1000 qof ayaa is dhiibi jirey. Sannadihii sagaashameeyadii dad aan 40,000 ka yarayn ayaa sannadkii is dhiibayey. Markii qaxootigii soo bateena waxaa la adkeeyey sharciyadii qaxootiga, waxaana kordhay dadka eedaynayey sharciyada Nederland u dejisay dadka soo galootiga ah. Dad badan ayay la ahayd inay Nederland 'buuxsantay'. Dad badan ayaa meeshii baasaboorka Nederland laga siin lahaa la siiyey kaadhadh ku meel gaadh ah. Sharciyadii dadka qoysaskooda loo keenayeyna waa la adkeeyey.
Pim Fortuyn iyo Theo van Gogh
6-dii May 2002 waxaa la dilay siyaasi caan ah oo Pim Fortuyn la odhan jirey. Wuxuu doonayey in sharciyada qaxootiga aad loo adkeeyo, xisbigiisii LPF-na guulo waaweyn ayuu soo hoynayey. Laakiinse markuu dhintay LPF aad bay hoos ugu dhacday, laakiinse fikirkii Pim Fortuyn weli wuu jiraa. 2004-tii waxaa la diley Theo van Gogh oo ahaa nin Nederland caan ka ah, oo filimmada sameyn jirey. Nin Maxamed Bouyeri la odhan jirey ayaa ninkan toogtay, dabadeedna tooray feedhaha kaga dhuftay. Ninkan xabsi daa'in ayaa lagu xukumay.
Maydkii Theo van Gogh wuxuu kaga tegey waraaq uu ugu dhaaranayo siyaasiyada Soomaaliga ah ee Ayaan Xirsi Cali. Iyada iyo Theo van Gogh ayaa filin wada sameeyey, kasoo magaciisa la yidhaahdo 'Submission'. Filinkani wuxuu ku saabsanaa naagaha Islaamka ah, kuwaasoo Ayaan iyo van Gogh ay aaminsanaayeen in la cadaadiyo. Aad baa filinkan loo eedeeyey. Xataa dad badan oo reer Nederland ah ayaa u arkayay inuu filinkani xuduudkii ka gudbay.
Soomaaliyada ugu caansan Nederland
Ayaan Xirsi Cali waxay Nederland ku soo gashay qaxooti ahaan, 1997-diina waxay qaadatay dhalashadii Nederland. Cilmiga siyaasadda ayay Leiden ka baratay, laakiinse marmarna turjumaan ayay ka ahayd Amsterdam, markii dambena siyaasadda ayay ku biirtay.
Markii hore xisbiga PVDA ayay ka tirsanayd, markii dambena xisbiga VVD. Eedayntii ay Islaamka ku haysay way sii siyaaday. Intii ay baarlamaanka ku jirtay Muslimiin ayaa iyada ugu hanjabay inay dilayaan. Mar kastana iyadda booliis ayaa Ilaalinayey, muddo badana meel qarsoodi ah ayay ku noolayd. Waxaa markii dambe soo shaac baxday inay Ayaan IND-da been u sheegtay markii magaceeda iyo taariikhday dhalatay la weydiiyey. Sidaa daraadeed wasiiraddii Verdonk la odhan jirey ayaa doontay inay Ayaan dhalashada Nederland kala noqoto. Ayaan markii dambe baarlamaanka way ka tagtay, waxayna u guurtay Maraykanka.
Xiisad soo dhex gashay dadyowga kala duwan ee Nederland
Dilkii Pim Fortuyn iyo Theo van Gogh dabadeed xidhiidhkii ka dhexeeyey dadka reer Nederland ee dhaladka ah, iyo dadyowga asalkoodu waddamo kale ka soo jeedo wuu sii xumaaday. Dad badan oo reer Nederland ayaa aaminsan in Muslimiinta xag jirtaa khatar ku yihiin dimuqraadiyada iyo xoriyada hadalka iyo fikradaha. Tan waxaa sii xoojiyay qaraxyadii loo geystay World Trade Centre iyo Madrid. Ninka xisbiga PVV haysta ee Geert Wilders la yidhaahdo ayaa baqdinta noocan ah isticmaala si uu taageero u helo. Wilders aad buu u eedeeyaa diinta Islaamka. Wuxuu kaloo aad uga soo horjeedaa qaxootiga badan ee Nederland soo gelaya.